Strong Woman Do Bong Soon – Gold Channel Movies
Episode 1Feb. 24, 2017
Episode 2Feb. 25, 2017
Episode 3Mar. 03, 2017
Episode 4Mar. 04, 2017
Episode 5Mar. 10, 2017
Episode 6Mar. 11, 2017
Episode 7Mar. 17, 2017
Episode 8Mar. 18, 2017
Episode 9Mar. 24, 2017
Episode 10Mar. 25, 2017
Episode 11Mar. 31, 2017
Episode 12Apr. 01, 2017
Episode 13Apr. 07, 2017
Episode 14Apr. 08, 2017
Episode 15Apr. 14, 2017
Episode 16Apr. 15, 2017
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက လတ်တလောထွက်ရှိထားတဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ ရေပန်းစား လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး ဟာသ၊ အချစ်၊ အက်ရှက် စတဲ့ ရသအစုံ ပါဝင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်ထားတဲ့ မင်းသမီး ဘတ်ဘိုယောင်းကလည်း သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကြောင့် ကျားမ ပရိသတ် သဘောကျသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မင်းသား ဘတ်ခယောင်းရှစ်ကတော့ ဒီကားနဲ့ ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်စာရင်း ဝင်သွားတဲ့အထိ ဒီကားက သူ့ကို နာမည်ကြီးသွားစေခဲ့တာပါ။ Pay TV Channel မှာ ပြသခဲ့တာတောင် ကြည့်ရှုမှုနှုန်း ၁၀ရာခိုင်နှုန်းရခဲ့ပြီး တရုတ်နဲ့ စင်ကာပူက နာမည်ကြီး အွန်လိုင်းဝက်ဆိုက်ဒ်တွေကပါ တစ်ပြိုင်တည်း ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အတွက် အာရှမှာပါ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ကားကောင်းတစ်ခုပါ။
ဘုံးဆွန်းက မွေးလာကတည်းက သူများမတူ တမူထူးခြားတဲ့ အင်အားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးပါ။ သူတို့ မိသားစုရဲ့ မျိုးရိုးမှာ သမီးမိန်းကလေးတိုင်းက သူမတူတဲ့ အင်အားကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။ အဲဒီ စွမ်းအားနဲ့ အပြစ်မဲ့သူကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင် လုပ်ခဲ့ရင် သူမမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အင်အားတွေ ပျောက်ဆုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့ ကျိန်စာတစ်ခု ရှိပါတယ်။ သူမရဲ့ရည်မှန်းချက်က သူမကိုယ်ပိုင် ဂိမ်းဇာတ်ကောင်တစ်ခု တီထွင်ဖန်တီးဖို့ပါ။ အမှန်တော့ သူမက သာမန်မိန်းကလေးတွေလို မိန်းမဆန်ဆန် ညင်သာနွဲ့နှောင်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်နေတာပါ။ သူမ တစ်ဖက်သတ်ကြိုက်နေတဲ့ ဂုဒူဆိုတဲ့ ကောင်လေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပုံစံမျိုး ဖြစ်ချင်ခဲ့သူပါ။
အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ဘုံးဆွန်းက သူမရဲ့ အင်အားကြောင့် ကံကောင်းစွာနဲ့ “Ainsoft” ဂိမ်းကုမ္ပဏီရဲ့ သူဌေး “အန်မင်းယော့”ရဲ့ သက်တော်စောင့်အလုပ်ကို ရခဲ့ပါတယ်။ သူဌေး အန်မင်းယော့က ဘုံးဆွန်း ကြိုက်နေတဲ့ ရဲအရာရှိ ဂုဒူနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပေ့ါ။ သူဌေး အန်မင်းယော့က ချမ်းသာတယ်၊ ဘယ်သူကိုမှ ဂရုမစိုက်တတ်ဘူး၊ အထူးသဖြင့် ရဲတွေကို အယုံအကြည်မရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ သူဌေး အန်မင်းယော့က မကြာသေးခင်ကပဲ သူ့ အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့စာတွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို လက်ခံ ရရှိခဲ့ပြီး သူ့နောက်ကို အမြဲ နောက်ယောင်ခံ လိုက်နေတတ်ပြီး အန္တရာယ်ပြုတဲ့အထိ ဆိုးဝါးလာတဲ့အတွက် အားသန်တဲ့ ဘုံးဆွန်းကို သက်တော်စောင့်ခေါ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့ ဘုံးဆွန်းနေတဲ့ ဒိုဘုံးဒုံးရပ်ကွက်ထဲမှာ ဆက်တိုက်ပြန်ပေးဆွဲတဲ့ အမှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဘုံးဆွန်းရဲ့ သူငယ်ချင်း ဂရောင်းရှင်းပါ ပစ်မှတ်တစ်ခု ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ပြန်ပေးသမားကို အမိဖမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဌေး အန်မင်းယော့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ သူမရဲ့အင်အားကို ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။
mg bravoJanuary 29, 2019Reply
ဘုံဘုံလေးရဲ့ ဇာတျလမျးတှဲကို အရမျးသဘောကပြါတယျ။
ရီလညျး ရီရတယျ။ လူကွမျးတှကေိုတောငျ ပွနျသနားလာမိပါတယျ။
May Phyo KyiFebruary 21, 2019Reply
Link သေသွားလို့ full episode လေးလိုချင်လို့ပါနော်
zmwApril 6, 2019Reply
Mr.blackApril 20, 2019Reply
Hein Htet ZawJune 18, 2019Reply
Link လေးပြန်ချိတ်ပေးပါလား openload ကဒေါင်းမရဘူး
userJune 19, 2019Reply